အခမဲ့ SHAREIT APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » shareit
SHAREit APK ကို
အထူးသတိပေးချက်မှတ်ချက်: ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ရန်, PC ကိုအဘို့သင့် SHAREit အထက်တွင် v4.0 သို့မဟုတ်ဖြစ်ရမည်။ www.ushareit.com ကနေနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးပါSHAREit apk, ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံး Cross-platform ဖိုင်လွှဲပြောင်းကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
- 200 ကြိမ်ဘလူးတုသ်မြန်နှုန်း!
- အဘယ်သူမျှမက USB! အဘယ်သူမျှမဒေတာအသုံးပြုမှု! အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်လိုအပ်!
- Android, iOS (iPhone / iPad), က Windows Phone, ထောက်ပံ့ Windows ကို, နှင့် Mac ။
- 600 နိုင်ငံများမှသန်း 200 ကျြောကအသုံးပြုသူအဆိုပါရွေးချယ်မှုကို။
SHAREit app ကိုအင်္ဂါရပ်များအားလုံးအနှစ်ချုပ်ကြောင့်တစ်ဦးအေးမြဗီဒီယိုကိုထုတ်စစ်ဆေး
[ပင်မ features တွေ]
- အဘယ်သူမျှမ network ကိုကန့်သတ်
ဝေမျှမယ်ဖိုင်တွေအခါတိုင်း & နေရာတိုင်းမှာ!
ဘလူးတုသ်ထက်ပိုမြန် 200 ကြိမ်, အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း 20M / s အထိတတ်၏။
- Cross-platform ကိုလွှဲပြောင်း
ဖုန်းများ & ကွန်ပျူတာများ & Tablets, အန်းဒရွိုက် & iOS ကို & က Windows Phone & Windows XP ကို ​​/7/ 8 များအတွက် cross-platform ကိုခွဲဝေမှု။
ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, ဂီတ, installed apps များနှင့်အခြားဖိုင်များကို။
သူငယ်ချင်းများ Portal ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ ဝေမျှဖို့ဒါလွယ်ကူသော!
- PC ကိုချိတ်ဆက်ရန်
ဖုန်းနှင့် PC ကိုအကြားဖိုင်တွေလွှဲပြောင်း
သင်၏ဖုန်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်ရေး PPT, သင့်တင်ဆက်မှုပိုမိုလွယ်ကူအောင်!
ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံအတွက်အသစ်ကတဦးတည်းမှသင့်ဖုန်းအဟောင်းမှအဆက်အသွယ်, SMS စာတို, MMS ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဂီတ, ဗီဒီယိုများ, apps များနှင့်အခြားဒေတာများကိုပုံတူပွား။
- Facebook ကို: facebook.com/bestSHAREit
- တွစ်တာ: twitter.com/bestSHAREit
- Instagram ကို: instagram.com/bestSHAREit
သငျသညျအစဉျအမွဲအခြားရန်သင့် Device များထဲကတစ်ခုကနေဒေတာတွေကိုလွှဲပြောင်း၏ဒုက္ခရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသလော သို့ဆိုလျှင်သင်အလုပ်တခုကိုပြီးမြောက်၏စုစုပေါင်းစိတ်ပျက်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေသည်။ စမတ်ဖုန်းဒေတာ transfer လုပ်ဖို့စမတ်ဖုန်းခက်ခဲပေမယ့်နေဆဲ doable ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ရန်သင့် PC ကိုသို့မဟုတ် laptop ထံမှဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ကြလျှင်, သင်ဒီမှာတည်ရှိသည်သောအစစ်အမှန်အခက်အခဲဖြတ်ပြီးလာကြပြီမယ်။ အားလုံးသင့်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုဒုက္ခမှအဖြေ ShareIt ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်အသုံးပြုသူများ jiffy အတွက်တယောက်ကိုတယောက်ကိရိယာမှမဆိုဖိုင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ShareIt လုံးဝအခမဲ့နှင့်သင့် laptop ထံမှနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာကနေနှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီသုံးစွဲဖို့, သင်ထိုကဲ့သို့သော hard disk ကို, ကို USB drive က, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို CD အဖြစ်မည်သည့်ပြင်ပအကူအညီမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလုံခြုံစွာသင်၏ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်ရှာနေလျှင်ထိုနောက်မှ, သင်သည်သင်၏ protected ကို Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ShareIt နှင့်အတူ, သင်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်တွေအများကြီးကယ်တင်မည်အခွင့်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ SHAREit မှတဆင့်လွှဲပြောင်းဘလူးတုသ်ထက်ပိုမြန် 200 ကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား?
အဆိုပါထုတ်လုပ်သူအသုံးပြုသူများရင်ဆိုင်ရသောအဆင်မပြေ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်ပါဘူးဆိုတာသေချာပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ SHAREit အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ကူးသည်အဘယ်ကြောင့်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲကြီးမားသင်ပို့ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်ဖိုင်တစ်ဖိုင်, လုပ်ငန်းစဉ်ချောမွေ့နှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာက, အမြန်ဖြစ်ပါတယ်။ SHAREit လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါင်းလုဒ်စတင်ဘို့မဆိုငွေပေးချေစရာမလိုပေ။ ဒါဟာဖြစ်စေအာကာသတွေအများကြီးယူဖွယ်ရှိမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာကလည်းအတော်လေးပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။
SHAREit ကျနော်တို့ကြိုးမဲ့ iPad, iPhone, Android နဲ့ Windows device များအကြားဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်သုံးနိုငျကွောငျးကိုတစ်ဦးအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမှဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းချင်သော Device များအားလုံးအတူတူပင်ကို Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသောနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျလွှဲပြောင်းနှင့်အတူစတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာသင်မှဒေတာပေးပို့သို့မဟုတ်ထံမှလက်ခံရရှိရန်စီစဉ်နေကြသည်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီအပေါ် SHAREit application ကို install လုပ်ပါ။
ပို့သည့်ကိရိယာထဲကနေ "Send" နှင့်သင်တို့ကိုပို့ချင်သောဖိုင် (s) ကိုရှေးခယျြရွေးချယ်ပါ။
သငျသညျအပေါငျးတို့သချိတ်ဆက်လက်ခံ devices တွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ သင်တို့ဆီသို့ပို့ချင်တကိုရွေးချယ်ပါ။
လက်ခံသည့်ကိရိယာပေါ်တွင် "လက်ခံ" ကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါဒေတာမှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ပါတယ်။ လွှဲပြောင်းကို Wi-Fi ကိုမှတဆင့်ဒေသအလိုက်ပြုမိုဃ်းတိမ်မှတဆင့်မသွားပါဘူးကတည်းကဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးက Android device ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုတည်နေရာတစ်ခုထဲတွင်ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် Apple ထုတ်ကုန်နှင့်တကွ, iPhone အတွက် SHAREit app ကိုဖွင့်ဖိုင်တွဲများအတွင်းဖိုင်များသိုလှောင်ပါသည်။ အဆိုပါ Android ဗားရှင်း One-touch နဲ့ဓာတ်ပုံကို backup လုပ်ထား, စမ်းချောင်းဓာတ်ပုံများ, ထိန်းချုပ်မှု PowerPoint ဆလိုက်ရှိုးများ, နှင့်အဝေးမှအမြင်ဖိုင်တွေအပါအဝင်အဘယ်သူမျှမပိုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အခြို့သောအပိုဆောင်း features တွေ, ပေးထားပါတယ်။
SHAREit လွှဲပြောင်းသင်တို့တွင်အထင်နိုင်သောမည်သည့်ဖိုင်ပုံစံထောက်ခံပါတယ်။ သငျသညျဂီတ, ဗီဒီယိုများ, ဖိုင်တွေ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ပင် apps များပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည် HD မှာလွှင့်သောအကြောင်းအရာများကိုပျော်မွေ့နိုင်အောင်လည်းတစ်ဦး Pre-ပေါင်းစည်း video player တစ်ခုကိုနှင့်တကွကြွလာ။ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးကို - သင်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးဂီတနားထောင်နိုင်သည်။ ဒီအပြင်သင်အမြဲနောက်ခံပုံများ, GIF များနှင့်စတစ်ကာများဒေါင်းလုပ်က customize နိုင်ပါတယ်။
peer-to-peer လဲလှယ်အပေါ်အခြေခံပြီး SHAREit အကျင့်ကိုကျင့်။ တဦးတည်းဖိုင်တွေနဲ့အခြား data ပို့, လက်ခံနိုင်အောင်အဲဒါကိုက Wi-Fi ကိုမှတဆင့် devices တွေကိုချိတ်ဆက်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံဆုံးနဲ့ user များ၏ခွဲဝေမှုလိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့၏ mode ကိုအဖြစ်ကို Wi-Fi ကိုအသုံးပြုသည်ကတည်းကသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောကို USB drive ကအဖြစ်, သင်တို့အပေါ်မှာဘာမှရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သငျသညျပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တွေမျှဝေဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ရင်တောင် SHAREit ကကိုင်တွယ်၏ဿုံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာကိုယ့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းခွဲဝေမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အဆိုပါ shared ဒေတာဖိုင်များကိုမိုဃ်းတိမ်၌ device ကိုမဟုတျဘဲအပေါ် local ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောကတည်းကလည်းလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ SHAREit ထိုကဲ့သို့သော Word, Excel, PowerPoint TXT, HTML ကိုနှင့် PDF documents တွေ, ဖိုင်တွဲများ, ဗီဒီယိုများ, ဂီတနှင့်ဓါတ်ပုံများနှင့် app များကိုအပါအဝင်မာလ်တီမီဒီယာအဖြစ်ကို formats တစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာအစက Windows 10 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏လှသောကြီးထွားလာလူကြိုက်များမှကျေးဇူးတင်ပါသည် app ကိုတရုတ်, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ဂျပန်, ရုရှားအတွက်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
SHAREit Android အတွက် Download
ယခုတွင်သင်သည် SHAREit သောအရာကိုသိသော၎င်း၏ features တွေ, ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့, Android အတွက် SHAREit ကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်ရဲ့ချရကြကုန်အံ့။ အောက်က-ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းများသင်တစ်ဦးတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကူးပေးသင့်ပါတယ်။ သငျသညျခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ဒီခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပြီးအချိန်မအတွက် SHAREit installed နှင့်အပြေးပါပြီ။
"Settings" ကိုသွားပြီး "လုံခြုံရေး" ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
က "Unknown Sources" Enable လုပ်ထားပါ။
အခုတော့ appsapk.com go သို့မဟုတ်ကဒီမှာဒီ link ကို click - https://www.appsapk.com/share-it/ - နှင့် APK ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ လျှောက်လွှာကို Android 4.0 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောမှတ်သားပါနဲ့။
ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာထံမှသို့မဟုတ်သင့်အကြောင်းကြားစာ bar ကိုဖြိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ် APK ဖိုင်ကိုဖွင့်။
"Install" နှင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာ app ကို install လုပ်ဖို့လိုအပျခွင့်ပြုချက်ပေးအပေါ်ထိပုတ်ပါ။
ဒါပဲ! သင်ပြုသောကြသည်! app ကိုဖွင့်ပါကစတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့။
သင်တို့သည်လည်း Windows XP သို့မဟုတ်7+ ပေါ်တွင် run သောမည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် SHAREit တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သငျသညျ SHAREit APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာတခြားပလက်ဖောင်းရှိပါတယ်နေစဉ်, Appsapk.com တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာများအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင် Android အတွက် Shareit ခေတ်သစ် application ကိုသုံးပြီးဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းရန်အဆင့်များမှာ
Step1: ပထမ, APK ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင့်စမတ်ဖုန်းအတွက် Android ကိုများအတွက်ဝေမျှမယ်က install လုပ်ပါ။
အဆင့် 2: Andoird များအတွက် Shareit ကို install ပြီးတာနဲ့သူကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူရဲ့ privacy သဘောတူညီချက်များကိုအတည်ပြုပါ။ သင့်အနေသဘောတူညီချက်များကိုလက်ခံပြီးနောက် app ကိုဖွင့် home screen ကမှ redirected လိမ့်မည်။
အဆင့် 3: တပ်ဆင်ပြီးသွားပြီးနောက်သင်ရုံဖိုင်ကိုလွှဲပြောင်းစတင်ရန်ပေါ်မှာ click နှိပ်တစ် send ခလုတ်မြင်လိမ့်မည်။
အဆင့် 4: Next ကို, သင်လျှောက်လွှာ၏အောက်ဆုံးထောင့်တွင်မြင်နိုင်သော Plus အား icon ကို click ပါဖို့လိုပါတယ်။ အခုတော့ကဲ့သို့သင်တို့အခြားကိရိယာပေးပို့သွားဖို့ရှိပါတယ်ထားတဲ့ဖိုင် type ကိုအသံ, ဗီဒီယို, Images ကို, အခြား Apps ကပများနှင့်ဆက်သွယ်ပါဆိုဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပိုပြီးဖိုင်တွေ browse စေရန်, ရိုးရှင်းစွာပြန် Plus အား icon ကို click ပါနှင့်သင်မျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိသည့်ဖိုင်များကိုရွေးပါ။
အဆင့် 5: သင်ဖိုင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့သင်က send ခလုတ်မြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးမျက်နှာပြင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့် button ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင်ဖိုင်များကိုဝေမျှဖို့အားလုံးအစုံရှိပါတယ်။
Shareit လျှောက်လွှာ၏အကောင်းအဆိုး cons
1 ။ အကြီးစားဖိုင်တွေယခုနှစ်ခု devices များအကြားမျှဝေဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
2 ။ Shareit အခြားအက်ပ်နဲ့ Bluetooth ခွဲဝေမှုထက်ဖိုင်ကိုခွဲဝေမှုအများကြီးပိုမြန်မြန်နှုန်းပေးသည်။
3 ။ အဆိုပါ UI ကိုအလွန်ပေါ့ပါးဤလျှောက်လွှာ၏စင်ကြယ်၏။
4 ။ ထိပ်အင်္ဂါရပ်က Shareit သုံးပြီးဖိုင်တွေမျှဝေဖို့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်အပေါ်မှီခိုမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Shareit အင်တာနက်မသုံးဘဲဖိုင်တွေအမျိုးမျိုးဝေမျှဖို့တစ်ခု application ဖြစ်ပါတယ်။
Shareit ကို Safe အသုံးပြုနည်းလား?
ဟုတ်ကဲ့, ကလုံးဝလုံခြုံနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်များ၏အဘယျအမျိုးအစား Sent ရနိုင်သလား?
သငျသညျစသညျဓာတ်ပုံများ, apps များ, ဂီတ, audio, ဗီဒီယိုများ, တူသောဖိုင်တွေများစွာကိုအမျိုးအစားများကိုဝေမျှနိုင်ပါတယ်
တစ်ခုလုံး Folder ကိုမျှဝေပါကဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
ဟုတ်ပါတယ်, app ကို 39 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤသူသည်သင်တို့ SHAREit အသုံးပြုနေသည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဤအကြံပြုချက်များသင်အနည်းငယ်ကကူညီပေလိမ့်မည်။ ယင်းရှာဖွေအကွာအဝေး 100 ခွကေိုန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကပစ္စည်းတွေကအရမ်းဝေးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသေချာပါစေ။ သင်ကသူတို့ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်ဆွဲသူတို့ကိုကျဆင်းနေခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေပေးပို့ချင်သောဖိုင်ကိုရွေးနိုင်သည်။ ဒေါင်းဖိုင်တွေသင့်ရဲ့ SHAREit ဖိုင်တွဲအတွင်း၌တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုတစ်အင်အားစိုက်ထုတ်လမ်းအတွက် Cross-platform ခွဲဝေမှုကမ်းလှမ်းကတည်းကကြောင့်နေပါစေသူတို့ကိုအသုံးပြုနေသည့်ကိရိယာအသုံးပြုသူများအကြားအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်။ သငျသညျ SHAREit ၏အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေလျှင်သို့သော်သင်ကအများကြီးပို features တွေဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသင်သင့်သူငယ်ချင်းများ '' ဝေမျှမယ်ဇုန်ကနေကြိုက်နှစ်သက်ဘာမှရွေးနိုင်သည်။
SHAREit - လွှဲပြောင်း & Share ကို
5.54 ကို MB
100,000,000 + downloads,
SHAREit Technologies က Co.Ltd
SHAREit app ကိုသင်ခန်းစာ
င်းကိုမျှဝေမည် shareit apk shareit download, ဝိုင်ဖိုင်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2019 မှာ 12: 36 ညနေ
Sheikh Mujibur Rahman says:
နိုဝင်ဘာလ 22, 2019 မှာ 8: 02 နံနက်
Ato Dacara says:
အောက်တိုဘာလ 25, 2018 မှာ 6: 47 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 26, 2018 မှာ 5: 14 ညနေ
မေလ 19, 2018 မှာ 9: 04 ညနေ
ဘာသာစကား Translator အခမဲ့, အသံစာသားအားလုံးဘာသာပြန်
Full HD ကိုဗီဒီယို player
လုပ်ရန်စာရင်း၊ အလုပ်များ၊ မှတ်စုများနှင့်သတိပေးချက်များ - …